Home News Al Shabaab oo Sare u Qaaday Weerarada Dhaba Galka Ah&Amisom oo Bilaabeysa...
Al Shabaab oo Sare u Qaaday Weerarada Dhaba Galka Ah&Amisom oo Bilaabeysa Howlgal Wado Furis Ah
Howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM, ayaa sheegay in ay billaabayaan howlgal lagu furayo waddada isku xirta Muqdisho iyo Baydhaba iyada oo ay kordhayaan weerarrada jid galka ah ee al-shabaab ay u geysanayaan Ciidanka AMISOM.
Afhayeenka Howlgalka AMISOM ee Soomaaliya Wilson Rono,ayaa sheegay in Ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya oo iskaashanaya ay billaabayaan howlgal ka dhan ah Al-shabaab,gaar ahaan Waddada Muqdisho iyo Baydhaba oo hadda go’an.
Wilson Rono,waxaa uu sheegay in weerarkii Jimcihii la soo dhaafay Ciidanka Burundi ku qabsaday Balcad ay ku dhinteen ugu yaraan 10 Askari sidoo kalena la bur buriyay inta badan 20 Gawaarida AMISOM ay wateen.
Waxaa uu sheegay in Weerarrada Al-shabaab ee sii kordhaya ay walaac ku abuurtay AMISOM loona baahanyahay in si deg deg ah looga jawaabo.
Wilson Rono,ayaa dhinaca kale sheegay in Ciidanka AMISOM ay isla jimcihii ka hortageen weerar kale oo jidgal ahaa kaas oo Ciidamada Kenya ku qabsaday Tuulada Faxfax-dhuun ee Gobolka Gedo,halkaas oo uu sheegay in AL-shabaab ay ku jebiyeen.